हप्तामा एक दिन उपवास बस्दा यस्तो लाभ « News of Nepal
भोक, यो शब्द सुन्दा कसको दिमागमा विभिन्न परिकारका खानेकुराको चित्र नआउला र । हामीले प्राय दिनमा ४, ५ पटक भन्दा बढि खाना र खाजा खाइरहेका हुन्छौ । एकचोटि याद गरौँ त के हामीले खाइरहेको खानाले फइदा मात्र गरेको छ या त्यसका केही बेफाइदा पनि छन् ।
तर हामीलाई के मतलब खान पाएकै छौ पेटमा अटाउँदासम्म खान्छौ । यी सबैकुरालाई एकातिर राखेर सोचौ त हामीले खाएका सबै खानेकुरा शरिरले पचाएको हुन्छ ? हुँदैन, हाम्रो शरीरले सबै प्रकारका खानेकुरा पचाउन सक्दैेन । अपच भएको खानेकुरा हाम्रो शरीरबाट बाहिर निष्कासन हुन्छ । तर केही अपच भएको खानेकुरा भने हाम्रो शरीर भित्र नै रहन्छ । हो, त्यही बाँकी रहेको विकारले नै हामीलाई रोगी बनाउँछ । हामी पढेलेखेका शिक्षीत प्राणी हौ । तर पनि कुन खानेकुरामा कति पोषक तत्व छ र कति मात्रामा खाने भन्ने कुरामा हामीले वास्ता गर्दैनौँ । हामीले खाने गरेका खानाहरुको मात्रा नमिलेर नै हामी बिरामी हुन्छौँ ।
यसर्थ पाचन यन्त्रलाई चुस्त र बलियो राख्नका लागि हामीले खानपानमा केही अनुशासन पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । खानपान सम्बन्धी अनुशासनको कुरा गर्दा उपवास/ब्रत पनि आउँछ । मानिसले चौबिसै घण्टा काम गर्न सक्दैन, विश्राम चाहिन्छ । यो कुरा त तपाईहरुलाई थाहा नै छ । तर के तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो पाचन यन्त्रलाई पनि विश्राम चाहिन्छ । सही र सन्तुलित खाना खाएर मात्र पुग्दैन समय समयमा हामीले पाचन यन्त्रलाई पनि विश्राम दिनुपर्छ । यसलाई हाम्रो भाषामा ब्रत, उपवास, फास्टिङ आदि भन्ने गर्दछौँ ।
यसको मतलब खाना नखाने भनको होइन तर समय मिलाएर ब्रत बस्दा हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ । हप्तामा एक अथवा दुइ पटकसम्म मिलाएर ब्रत बस्दा फाइदा हुन्छ । शरीरको शुद्धिकरणका लागि खानपानलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यो विधी अन्र्तगत भोकै बस्ने, फलफूल मात्र खाने, उसिनेको खानेकुरा मात्र खाने वा सुपाच्य भोजन मात्र गर्ने तौरतरिका अपनाइन्छ । ब्रत धार्मीक आस्थासँग पनि जोडिएको हुन्छ । धार्मिक आस्थाको हिसाबले होस् वा स्वास्थ्यप्रति सर्तक भएर, ब्रत बस्नु फाइदाजनक नै छ । ब्रत बस्नुका केही फाइदाहरु :
१. हप्तामा एक दिन ब्रत अथवा खाली पेट बस्दा शरीरको आन्तरिक शुद्धिकरण हुन्छ । शरीरमा रहेका विषाक्त तत्वहरु बाहिर निस्कन्छ । यसका लागि हामीले थोरै शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने दिन रोज्न सक्छौँ ।
२. एक दिन खाली पेट बसेमा हामी धेरै प्रकारका रोगहरुबाट टाढा रहन्छौँ । दैनिक जीवनमा हामी कुनै न कुनै किसिमको पेट सम्बन्धि रोगबाट ग्रस्त हुन्छौँ । धेरै मानिसहरु अपच, पखाला जलन आदि समस्याबाट ग्रस्त हुन्छन् । खाने बेलामा के, कती खाने भन्नेमा हामीले ध्यान दिँदैनौ । धेरै खानेकुरा खाएमा पखला लाग्छ । खाना नखाएमा ग्याष्ट्रिकले सताउन थाल्छ । हप्तामा एकपटक भोकै बस्दा अपच, ग्याष्ट्रिक, कब्जियत, पखला, एसिडिटी, जलन आदिको समस्याबाट मुक्ती पाइन्छ ।
३. हप्तामा एक दिन खाली पेट बस्दा कतिपय दीर्घ रोगमा पनि लाभ मिल्छ । यसले विषेश गरी उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा सघाउछ । यसका साथै शरीरमा रहेको कोलेस्ट्रोलको स्तर पनि घट्छ ।
४. एक दिन खाली पेट बस्दा मुटुको सम्बन्धि समस्यामा पनि लाभ पुग्छ । हृदय रोगको जड भनेकै कोलेस्ट्रोल हो । यसरी खाली पेट बस्दा कोलेस्ट्रोलको स्तर घट्ने हँदा हृदय रोगपनि केही मात्रामा घट्दै जान्छ ।